बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै, तोलाको कतिमा झर्याे ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै, तोलाको कतिमा झर्याे ?
बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै, तोलाको कतिमा झर्याे ?
माघ २६ गते, २०७७ - १३:४२
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा रु २०० ले घटेको छ । छापावाला सुन तोलामा रु ९० हजार ४०० मा कारोवार भएको छ । छापावाला सुन आइतबार तोलामा रु ९० हजार ६०० मा कारोवार भएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन पनि तोलामा रु २०० ले घटेको छ । रु ९० हजार १५० मा आइतबार कारोवार भएको तेजाबी सुन आज रु ८९ हजार ९५०मूल्य निर्धारण भएको छ । त्यस्तै चाँदी तोलामा रु पाँचले बढेको छ । रु एक हजार ३१० मा आइतबार कारोवार भएको चाँदी आज तोलामा रु एक हजार ३१५ मूल्य निर्धारण भएको छ ।
माघ २६ गते, २०७७ - १३:४२ मा प्रकाशित